Flight Studios + otu
Flight Studios + otu 8 ọnwa 2 izu gara aga #1530
Ndewo onye ọ bụla,
Abụ m onye isi mmalite na FlightStudios (ex OFX Interactive Simulation) Obi dị m ụtọ ịmepeere obodo niile usoro mmemme otu anyị (15,00 € maka afọ 2 nwere ohere zuru oke).
FS + bụ naanị onyinye ịdenye aha na ahịa, ọ na-enye ohere iweta simulator gị n'ọkwa ọzọ, ọ dịghị mkpa ịme nhọrọ ị nwere ike igboju agụụ gị niile. N’oge ndebanye aha gị, ị ga-enweta ọdụ ụgbọ elu, obodo, ebe gburugburu, patịkịlị na nghọta mgbasa ozi FS + na-akparaghị ókè. Anyị ga-akwụ gị ụgwọ otu oge (n’ụbọchị ịdenye aha mbụ gị) ma ị nwere ike wepu aha na oge ọ bụla.
Site na mbata nke Microsoft Flight Simulator ya na gburugburu ebe obibi ọhụrụ, ntinye aha FS + ga-abụ ihe kachasị ike iji bulie ọdụ ụgbọ elu gị.
Chọpụta ebe nkiri ọhụrụ anyị: South America Landclass Mpaghara
njikọ: Ebe nrụọrụ weebụ Studgbọ Egwuregwu Flight
Flight Studios + otu 7 ọnwa 5 ụbọchị ago #1562
FlightStudios dere: Ndewo onye ọ bụla,
FS + bụ naanị onyinye ịdenye aha na ahịa, ọ na-enye ohere iweta simulator gị n'ọkwa ọzọ, ọ dịghị mkpa ịhọrọ nhọrọ ị nwere ike igboju ọchịchọ gị niile nke ikuku na-enweghị nkwekọrịta. N’oge ndebanye aha gị, ị ga-enweta ọdụ ụgbọ elu, obodo, ebe gburugburu, patịkịlị na nghọta mgbasa ozi FS + na-akparaghị ókè. Anyị ga-akwụ gị ụgwọ otu oge (n'ụbọchị nke gị meilleurs kredit conso ndenye aha mbu) ma inwere ike wepu aha n’oge obula.
Daalụ maka ọkwa a, achọtara m ozi ị nyere dị ezigbo ụtọ ma zie ezi.